OED COVID-19 | Nasashada Shaqaalaha dugsiga
Nasashada Shaqaalaha dugsiga
Shuruucda federaalka iyo gobolka ayaa u baahan shakhsiyaadka ka shaqeeya (ed) xarun waxbarasho (yada) inta lagu gudajiray sanad aasaasi ah sheegashadooda caymiska shaqo la'aanta ayaa dib loo eegay xilliyada fasaxa. Fayl ayaa loo diyaarin karaa dib u eegis rasmi ah oo uu sameeyo garsoore go'aamiya haddii mushaharka hay'adda waxbarashadda loo adeegsan karo sheegashada faa'idooyinka caymiska shaqo la'aanta inta lagu jiro xilliyada fasaxa*.
A sanad aasaasi ah waa afarta ugu horeysa shanta meelood ee jadwal taariikhedka la dhameystiray ka hor sanadka macaashka. Tusaale ahaan, haddii qofku codsado macaashka bisha Maarso 2020, sheegashada sannad-dugsiyeedka caadiga ah waxaa ku jiraaya 4tath rubuc 2018 ilaa 3dard rubuc 2019 (Oktoobar 1, 2018 illaa Sebteember 30, 2019). Sannadka aasaasiga ahi wuxuu is beddelaa rubuc walba oo taariikhi ah waxaana go'aamiya rubuca dacwadda bilowga ah ee la xareeyay.
Haddii shaqsi uusan u qalmin caymiska shaqo la'aanta iyadoo la adeegsanayo heerka aasaasiga ah ee sannadka, waxaan isticmaalaynaa afarta qaybood ee ugu dambeeyay ee la dhammaystiray.
Waa maxay mudada nasashada dugsiga?
Fasaxyada dugsiyada waa xilliyada ay ardaydu inta badan ku jiraan xilliyada nasashada. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Guga ama fasaxa xagaaga. Haddii shaqaale dugsi codsado caymiska shaqo la'aanta inta lagu jiro fasaxa dugsiyeedka, sheegashadooda waa in dib loo eego si loo arko haddii mushaharka machadkooda sanad dugsiyeedka la isticmaali karo inta lagu jiro fasaxyada dugsiga.
Waxaan u shaqeynayay sanadka oo dhan dugsi. Sheegashadaydu ma waxay u baahan tahay in dib loo eego inta lagu jiro xilliyada fasaxa dugsiga?
Waa laga yaabaa. Waxay kuxirantahay xilliga nasashada ee dib loo eegayo iyo goorta aad u shaqaysay dugsiga. Dib-u-eegiddu waxay ku saleysan tahay marka ardaydu inta badan ku jiraan xilliyada nasashada, ee ma aha markay shaqaalaha shaqeeyaan.
Waxaan si kumeel gaar ah ula shaqeynayay dugsi, laakiin waxaan ka shaqeynayay waqti buuxa meel kale markii shaqada la iga fariisiyey. Sharciyada fasaxa dugsiga miyay i khuseeyaan
Haa, haddii aad leedahay mushaar waxbarasho sannadka aasaasiga ah ee sheegashadaada. Waaxda Shaqo-siinta ee Oregon waa inay dib-u-eegis ku sameysaa sheegashooyinka shaqaalaha dugsiga ee u shaqeynayay waqti-buuxa, waqti-dhiman, ama boos ku-meel-gaar ah u ah ee dugsiga.
Waxaan ka shaqeyn jiray dugsi beri hore, laakiin waxaa la iiga fadhiisiyey shaqo kale. Sheegashadayda shaqo la'aanta ma u baahan tahay in dib loo eego?
Haddii aad u shaqeysay dugsi ka hor inta aan lagu shaqaaleysiinin shaqadaada cusub mushaarka dugsiguna uu ku jiro sannadka aasaasiga ah, sheegashadaada ayaa laga yaabaa inuu u baahdo in dib loo eego inta lagu jiro fasaxa dugsi kasta. Tani waxay khuseysaa inkasta oo aadan mar dambe u shaqeynaynin dugsiga.
Anigu waxaan ahay aqoon yahan laakiin la iima siinin ogeysiis ah inaan ku laabanaayo shaqadan dayrta. Miyaan u qalmaayaa manfacyada caymiska shaqo la'aanta oo wali waa in dib loo eego codsigeyga inta lagu jiro fasaxyada dugsiga?
Waxaad xaq u yeelan kartaa inaad hesho faa’idooyinka inta lagu jiro xilliga fasaxa haddii aan lagu siin Hubsiin macquul ah inaad soo laabanaysid nasashada kadib. Guud ahaan, Hubsiin macquul ah waxaa loola jeedaa inaad haysato sheegashada shaqo oo isku mid ah ama isku awood ah isla heerka mushaarkaaga (ama 90% gudahood). Si kastaba ha noqotee, waa inaan dib u eegno sheegashadaada si aan u gaarno go'aankaas.
Waxaan u shaqeeyey shirkad gaar loo leeyahay oo basaska ka bixiso dugsiga. Sharciyada fasaxa dugsiga miyay i khuseeyaan
Maya. Ganacsiyada adeegyada u fidiya dugsiyada looma tixgeliyo inay yihiin kuwa shaqo-bixiyeyaal waxbarasha ah oo dib looma eegay xilliyada nasashada ee dugsiga.
Waxaan u shaqeeyaa dugsi laakiin ma ihi macalin. Sharciyada fasaxa dugsiga miyay i khuseeyaan
Waxay kuxirantahay. Waaxda Shaqo-siinta ee Oregon dib uma eegaan xilliyada fasaxa dugsiga ee shaqaalaha bixiya adeegyada nadaafadda ama ka shaqeeya hawlgalka iyo dayactirka xarumaha dugsiga.
Anigu waxaan ahay macalin bedel ah, laakiin waxaan ka shaqeeyey saacado aad u yar dugsi. Sheegashadayda shaqo la'aanta ma u baahan tahay in dib loo eego?
Haa, haddii aad shaqaysay saacadahaas sannadka aasaasiga ee sheegashadaada. Macallimiinta beddelka ah waxaa dib loogu eegay isla sharciyada ay qaataan shaqaalaha kale ee dugsiga.
Muddo intee le'eg ayay qaadanaysaa in dib loo eego sheegashada hoosta sharciyada fasaxa dugsiga?
Sheegasho kasta oo nasasho dugsi waa in dib loo eegaa. Nidaamkaas wuxuu qaadan karaa ilaa 14 toddobaad.
Waxaan u shaqeeyay Head Start oo sheegashadeyda waxaa qabta sharciyada dib u eegista nasashada dugsiga. Saaxiibkay ayaa u shaqeeya Head Start oo helay lacagtooda. Maxaa dhacaya?
Haddii aad u shaqeyso hay'ad waxbarasho oo bixisa adeegyada Head Start, waa inaad dib u eegtaa sheegashadaada inta lagu jiro xilliyada fasaxa dugsiga. Haddii aad u shaqeyso hay'ad samafal ah ama degmo oo bixisa adeegyada Head Start, sheegashadaada uma baahna in dib loo eego inta lagu jiro xilliyada fasaxa dugsiga.
Haddii aanan isticmaali karin mushaarkeyga dugsiga inta lagu jiro xilliga fasaxa, weli ma ka heli karaa manfacyada shaqo la'aanta shaqadayda kale?
Haddii aad mushaar ku leedahay sanadka aasaasiga ah aysanimaan machadka waxbarashada, waxaan u isticmaali karnaa mushaarka si aan u aragno haddii aad u qalanto qaddarka faa'idada isbuuclaha ee la dhimay. Si aad ugu qalanto sheegasho mushaar aan waxbarasho lahayn, waxaad u baahanaysaa inaad haysato 500 saacadood oo shaqo ah ama mushaar u dhigma 1.5x rubuc sare.
Miyaan xaq u leeyahay Faa'iidooyinka Inta Aad Sugeyso barnaamijka inta codsigayga shaqo la'aanta dib loo eegayo?
Waxay kuxirantahay. Haddii sababta kaliya ee aadan ushaqeyn ay ugu wacan tahay waqtiga nasashada, waxaa laga yaabaa inaadan xaq u yeelan Faa'iidooyinka Inta Aad Sugeyso barnaamijka. Haddii sheegashadaadu la xiriirto COVID, waad u-qalmi kartaa Faa'iidooyinka Inta Aad Sugeyso. Shaqaalaha Waaxda Shaqada ee Oregon waxay la xiriirayaan dadka uqalma barnaamijkan. Uma baahnid inaad nala soo xiriirto.
* Go'aannada waxaa lagu soo saaraa macluumaadka hadda jira ee la heli karo. Haddii xaalad shaqsi isbedesho kadib go'aanka la soo saaray, dib ayaan u fureynaa baaritaanka waxaana suuragal ah inaan soo afjarno ama aan ka noqonno go'aanka.